भारतीय सेना प्रमुख सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना– मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुग्यो, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी? - ramechhapkhabar.com
भारतीय सेना प्रमुख सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना– मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुग्यो, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी?
भारतीय सेना प्रमुख (चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ– सीडीएस) जनरल विपिन रावत सवार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ। हेलिकोप्टरमा १४ जना सवार थिए। भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले दुर्घटनास्थल रहेको क्षेत्र तामिलनाडुको नीलगिरीका कलेक्टरलाई उद्धृत गर्दै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको जनाएको छ।
जनरल रावत, उनकी पत्नी, अरु उच्च सैनिक अधिकारी र रावतको सचिवालयका कर्मचारीहरु सवार हेलिकोप्टर बुधबार दिउँसो तामिलनाडु राज्यको कुन्नुरनजिक घना जंगलको बीचमा दुर्घनामा परेको थियो।
विशिष्ट व्यक्तिहरुको ‘सवारी’मा प्रयोग हुने भारतीय वायु सेनाको एमआई–१७ बी५ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको शवको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको तयारी गरिएको छ।
को–को थिए हेलिकोप्टरमा?
हेलिकोप्टरमा सेना प्रमुख विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर (सहायक रथी) एलएस लिड्डर, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल (प्रमुख सेनानी) हार्जिन्दर सिंह तथा पीएसओहरू एनके गुर्सेवक सिंह, एनके जितेन्द्र कुमार, एल/एनके विवेक कुमार, एल/एनके बी साइ तेजा र हाव सत्पाल सवार थिए।
रावत जनवरी १, २०२० भारतको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त भएका थिए। उनी ३१ डिसेम्बर २०१६ देखि ३१ डिसेम्वर २०१९ सम्म भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष थिए।
म बुधबार दिउँसो घरमै थिएँ। एक्कासी घर नजिकै ठूलो आवाज आयो। शुरुमा हेलिकोप्टर रुखका हाँगा काट्दै अघि बढ्यो। हेलिकोप्टरमा आगो बलेको देख्यौं।
हेलिकोप्टरका पङखा छियाछिया भएर खस्दै थिए। हेलिकोप्टरका केही यात्रु ढोकाबाट गुहार माग्दै थिए। म र मेरा छिमेकी दौडेर घटनास्थलमा जान कोसीश पनि ग¥यौं। ठूलो आगोको मुस्लोमा हेलिकोप्टर जल्दै गरेको देखेपछि हामी अघि बढ्न सकेनौं।